Ebumnuche 7 mere na ị gaghị azụta Samsung Galaxy S7 | Akụkọ akụrụngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị 7 ihe mere ịzụta Samsung Galaxy S7, nke a na-ererịrị na eze na ahịa ma ọ bụ Samsung ọhụrụ nzọ iji gbalịa imeri ahịa ekwentị mkpanaaka ọzọ. Ihe asaa anyị nyere gị bụ ihe kachasị amasị gị yana nchekwa zuru ezu ha kwenyesiri ike n'ọtụtụ n'ime gị, mana dịka anyị kwurula na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere na ị gaghị azụta Galaxy S7.
Taa n'isiokwu a anyị ga-agwa gị otu ị si eche n'echiche 7 ihe mere na ị na-ekwesịghị ịzụta a Samsung Galaxy S7. Fọdụ n’ime ha pụtara ìhè nke ọma, mana n’ime ha ọ nwere ike ọ bụghị ada m ma ọ bụ kpọlite ​​m gị.
Ọ bụrụ na ị na-atụle ohere ị ga-enweta Samsung Galaxy S7 ma ị gụọla ihe ndị mere ị ga - eji zụta ya n'egbughị oge, taa anyị ga - agwa gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ kpatara na ikwesighi. N'ezie, mkpebi ikpeazụ dị n'aka gị, anyị na-enye gị data naanị ka i wee buru ha n'uche ma mee mkpebi kachasị mma.
1 Ọdịdị zuru oke zuru oke, nke agbajiri site na ile ya anya
2 Ihuenyo bụ curved ma ọ bụ dị obere
3 Batrị abawanyela, mana ọ ka ezughi oke
4 Gwọ a na-akwụ ụgwọ
5 N'ime ọnwa ole na ole Galaxy S7 ga-aba uru nke ukwuu
6 Mgbanwe ndị dị na Galaxy S6 adịghị oke
7 Anyị achọghị nnukwu ama
Ọdịdị zuru oke zuru oke, nke agbajiri site na ile ya anya
Ọ dịghị onye nwere obi abụọ na nke ahụ imewe nke Samsung Galaxy S7 bụ ihe nkiri n'ụzọ ọ bụla, ma ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ịgbanahụ nke ahụ anyị na-eche ihu igwe na-emebi emebi ngwa ngwa nakwa na dị ka ha na-ekwu na ọ nwere ike imebi naanị site n'ile ya anya.
Ọ gwụla ma anyị kpachapụrụ anya ma ọ bụ anyị yikwasị ya maka ndụ na ikpe, Galaxy S7 anyị agaghị adịte aka. Cones ka eji ihe di elu, mana ha adighi eguzogide ọgwụ. Ọ bụrụ na ịnweghị oke nlezianya ma ọ bụ nnukwu aka, ama ama a abụghị maka gị.
Ihuenyo bụ curved ma ọ bụ dị obere
Oge a Samsung kpebiri ịmalite ụdị abụọ dị iche iche nke Galaxy S7 a, ka anyị kpọọ ya nke ọma, nke na-enye anyị ihuenyo 5,1-inch. Nke ọzọ, nsọtụ, na-enye anyị nnukwu ngebichi na ihuenyo gbagọrọ agbagọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ọnụ na nnukwu ihuenyo, anyị ga-eloda ma anyị chọrọ ya na ihuenyo a na-agagharị agagharị ma ọ bụ na ọ bụrụ na anyị chọrọ ama nwere ihuenyo nke ihe karịrị 5 sentimita asatọ anyị agaghị enwe ike ịnụ ụtọ usoro ahụ.
Ime ụdị 4 nke Galaxy S7 ga-abụrịrị ihe ngwọta ga-atọ mmadụ niile ụtọ, ma anyị maara na ọ na-esiri Samsung ike. Nke a n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ọ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa kpatara ịghara ịzụta ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea.
Batrị abawanyela, mana ọ ka ezughi oke
Ọ bụ ezie na Samsung emeela batrị Samsung Galaxy S7 ka mma karịa Galaxy S6, 3.000 mAh nke ọnụahịa ọhụrụ a nyere ka ezughi oke n'ụzọ doro anya ma ọ bụrụ na anyị ewere na anyị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka nwere ihuenyo buru ibu karịa 5 sentimita asatọ.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ smartphone na-enye anyị nnwere onwe nke karịrị 24 awa na-enweghị obi abụọ a Galaxy S7 ekwesịghị ịbụ nhọrọ ebe batrị ya ga-eme ka anyị rute na njedebe nke ụbọchị, mana ọ bụghị karịa.
Gwọ a na-akwụ ụgwọ
N'agbanyeghị eziokwu na ọ na-esiwanye ike ịzụta ngwaọrụ mkpanaka nwere njirimara nke Galaxy S7, site na mgbazinye ego, site na ntinye dị mma ma ọ bụ site na onye na-ahụ maka ekwentị, ọnụahịa ya ka na-egbochi kpamkpam.
Paykwụ ụgwọ karịa euro 700 maka ekwentị mkpanaaka, maka ọtụtụ akụkọ na atụmatụ ọ na-enye anyị, bụ ihe nzuzu Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na nke ahụ bụ uche m.
N'ime ọnwa ole na ole Galaxy S7 ga-aba uru nke ukwuu
Gbasara ọnụahịa nke Samsung Galaxy S7 anyị agaghị echefu nke ahụ n'ime nanị otu afọ anyị ga-ahụ Galaxy S8 ka ọ pụtara na ebe ahụ, nke ga-ahapụ ọnụahịa nke ekwentị a nke dị ugbu a na akụkọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị na ala. Otú ọ dị, anyị agaghị echere otu afọ maka ọnụahịa nke ọhụụ ọhụrụ Samsung ka ọ daa nke ukwuu. Studiesfọdụ ọmụmụ na-eme atụmatụ na n’ime izu ole na ole ama ama a nwere ike ịdị ọnụ ala n’etiti euro 100 na 150.
Maka ndị na-eche otu izu ịzụta Galaxy S7 ha, ọ ga-abụ oke akụkọ ịchekwa euro ole na ole, mana ndị niile zụrụ ya ugbu a ga-ahụ na enyo na ọbụlagodi iwe na ha ahapụla ezigbo ego euro na okporo ụzọ.
Mgbanwe ndị dị na Galaxy S6 adịghị oke
Samsung Galaxy S7 abanyela na mmelite ndị ọzọ ma megharia ka ọ ghara isi bụrụ ihe na - eme ya na nhazi ya nke na - esonyere ya ebe nchekwa RAM na - abawanye arụmọrụ nke ọnụ. Ka o sina dị ndozi ndị bu ya ụzọ, Samsung Galaxy S6 adịghị oke Ma eleghị anya, maka ndị niile nwere ọkwa mbụ nke ụlọ ọrụ South Korea ọ bụ ihe na-adịghị mkpa iji nweta Galaxy S7 ọhụrụ a.
Maka ndị na-eche ịzụrụ otu Galaxy S7 ọhụrụ, ọ nwere ike bụrụ ohere ka mma iji nweta Galaxy S6 na ọnụahịa nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nguzozi ma e jiri ya tụnyere ihe batara na ahịa ihe dịka afọ gara aga.
Anyị achọghị nnukwu ama
N'agbanyeghị ihe anyị niile na-ekwu ma na-ekpeghachi n'ọtụtụ oge ọ dịghị onye ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla kwesịrị ịnwe ngwaọrụ mkpanaka dịka Samsung Galaxy S7. N'iji ike karịrị akarị, atụmatụ aghụghọ na ọnụahịa karịrị akarị, anyị nwere ike ịsị na ọ karịrị oke maka onye ọrụ ọ bụla.
Inwe ya dika ihe ojoo doro anya na o bu ihe ozo, ma odighi onye kwesiri itinye ihe kariri euro 800 na ngwa mkpanaka ma enwere uzo ozo di na ahia, di otutu onu ala ma nke ahu n’enye anyi ihe kariri. nkọwa.
Nwere ike iche maka ihe ọ bụla ọzọ kpatara na anyị ekwesịghị ịzụta Samsung Galaxy S7?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu na netwọkụ ndi anyi nọ na ya. I nwekwara ike ịgwa anyị ma ọ bụrụ na ị kpebiri ịzụta Galaxy S7 n'ihi na ị kpebiri ma ọ bụrụ na mkpebi ahụ abụghị, anyị na-anụ ọkụ n'obi ka ị gwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » 7 ihe mere na ị na-ekwesịghị ịzụta a Samsung Galaxy S7
O doro anya na ihe kpatara ịghara ịzụta S7, o yiri ka ọ bụ ihe ederede iji mebie nke gara aga. Enweghị arụmụka arụmụka.
Zaghachi ka betinrx
Enweghị ihe kpatara ya, naanị m ga-anọnyere ọnụ ahịa ya na atụmatụ ya, nke ga-ezuru ịzụrụ ya.
Ọ bụ ugbu a ọmarịcha ama kacha mma n'ụwa
Mere a bit incoherent, ma nke ikpeazụ bụ ugbua nzuzu .. ị na-adịghị mkpa a "ibu ama" ma mgbe ihe kọrọ? Ha na -_-
Zaghachi Felipe Pita
Ọ dị ka mgbasa ozi ọjọọ site na IPHONE dị oke ọnụ na China
Samsung bụ onye Korea, kedụ ihe ziri ezi?
Ekele na ekele maka okwu gị !!
Ọ na-eme m nzuzu ederede ma ọ bụrụ na m amalite ịchọ azịza nke ọ bụla n'ime ihe kpatara gị, m ga-akụtu ha niile
Anaghị m agbachitere Samsung ma ọ bụ akara ọ bụla bụ okwu zuru oke
Taa ezigbo ekwe ntị na-abịa site na ihe ndị dị adị, ……… Anaghị m ahụ onwe m n'anya
ịgbatị ma kedu ihe mkpofu bu ihe ha na-ede
Otu ihe kpatara ya bụ na anyị achọghị nnukwu smartphone ???? Pffff
Otu ihe kpatara ya bụ ụgwọ pfffffdd ma ọ bụrụ na achọrọ m iji 1000 ego na iphone galaxy ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ dị m ka anaghị m ahụ ihe kpatara ya
N't hụghị ule na-eguzogide ha mere S7? A na-eme ka ekwentị a na-eyi uwe na-enweghị mkpuchi ruo ọtụtụ afọ. Kedu ihe dị njọ.
Ejikọtara ihe kpatara nke a dabere na ahụmịhe m. Mgbe m nwalere Galaxy S6 ọ si n'aka m pụọ n'ime nkeji 5 nke iwepụ ya na igbe ahụ wee daa. M na-adịghị ama esịn Galaxy S7 ma, ma ọ bụ nnọọ na-amị amị na mee elu mee ọ ga-dobe.
Ndewo, ụbọchị ọma.M na-achọ ịzụta Samsung S7 na m ga-achọ ịma ma m tinye ụdị ahụ na obere akpa ma tinye m mica iko ma ọ bụrụ na ọ daa, ọ ga-agbaji. DAALỤ
Ryu777 abanye dijo
Ugboro atọ S6 Edge m adaala ma ọ bụghị ọkọ na ihuenyo. Enyi m nwanyị, ya S6 Edge Plus dara mgbe ọ na-agafe Puerta del Sol na Madrid, ọ dara site na ihuenyo ahụ, maa nsonaazụ ya. Ọ dịghị mkpa, agwalarị m gị, KPỌT .R.. Maka ihuenyo na-adịghị mma, ndị nke Xperia Z3, ọdịda site na tebụl na nwa nwanne nna m zigara ya na SAT iji gbanwee ihuenyo ahụ, otu izu otu enyi ya kụrụ elekere na ịpịa ya wee mee oghere na ihuenyo ahụ, ọzọ ọzọ na SAT.
Ihe i dere bu ihe ojoo, n’ozuzu, site na mbido ruo na isi. Na n'elu nke ị na-aga na-ekwu na S7 ka na-adịghị kụrụ gị.
M na-ekwusi ike, Edge na Edge Plus na ebe a ha na-aga n'ihu na ihu ha. M kụrụ aka na osisi. Ma ebe ọ bụ na ihuenyo 5-inch dị obere maka ama, ọ bụ ezigbo, n'eziokwu, m ga-ekwu na ọ dịla nnukwu. 5,5 ″ bụ ihe mgbu n'akpa, n'eziokwu, Plus enyi m nwanyị zụtara m ya, agwara m ya na ọ bụrụ na ọ zụta S6 ihu anyị ga-agbanwe ha, na enwetaghị m ịhapụ Edge Plus, echere m n'ihi na m ama ikpe eyi uwe bandolier. Ihuenyo 5,5 is buru oke ibu, otutu oge ha na etinye onyogho ndi ahu n'ime igwe di oke onu karie ka ha nwekwuo oke ha kwesiri ka ha tinye ihe n'akuku ha.
Prohibitive price, ọ dịghị ihe karịrị ihe iPhone, ihe m na-amasị ndị kasị banyere iPhone bụ ya ịrụ ọrụ na a kwesịrị ekwesị size. Anyị achọghị telivishọn n’akpa anyị.
Kedu ihe ga-adị ọnụ ala na ọnwa ole na ole? Ezi uche, ọ gwụla ma anyị na-ekwu maka ụlọ dị n'etiti Madrid, ụfọdụ ala ka ewepụtara ma ọ bụ eserese, ihe niile na-agbadata na ọnụahịa karịa oge. IPhone anaghị agbadata nke ukwuu na ọ bụ ya mere eji azụta ndị gara aga obere.
Mgbanwe ndị metụtara S6 abụghị ọtụtụ, mana ọ bụrụ na ịnweghị S6 ọ bụ ihe ịtụnanya, 1 GB karịa RAM, ANA-ANAKWETA MMIRI NA DB D, MGBE MADO SD, AKW ,KWỌ KWES batteryR battery, Mgba ọkụ dị ole na ole, mmelite ndị ọzọ. nke sistemụ arụmọrụ n'ihu.
You na-achọpụta na ihe niile a na-ekwu na-ekwu na ị dee ederede nzuzu, na-enweghị njigide, na ị na-emebiga ihe ókè?
Zaghachi Ryu777 Ingress
Echere m na ị na-aga ule na s6 ma enwere ọtụtụ ya na ibe ya
Ọ bụ iko ma anyị akpachara anya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ iko maka onye ọ bụla ọbụlagodi na ọ bụ iko primium
Monica Ibarra kwuru dijo
Alvaro emetụbeghị ekwentị, Samsung s7 were ụbọchị asaa. Ọ dị nnọọ mwute ebe m ga-akwụ ya ụgwọ maka afọ 7 ma echere m na m na-etinye ego na isiokwu na-eguzogide ọgwụ.
Zaghachi Monica Ibarra
kpakpando ibeth dijo
Ndewo Alvaro, azụrụ m S7 8 ụbọchị gara aga, ọ dị mma na ihe niile ha chọrọ, dị ka ha na-ekwu, ọ bụrụ na ọ dị m ka ọ dị m, m na-etinye ya, oge, mana amaghị m ekwentị ha mere. ọ na-akwụ ụgwọ na ihuenyo pụtara gbajiri na ghara banyere na nnọchi bụ oké ọnụ ………. ya mere na ọ mara ezigbo mma mana ọ na - emebi emebi anaghị m akwado ya
Zaghachi ibeth star
Enwere m ọtụtụ ihe kpatara m ga-eji zụta S7 ma ọ bụrụ na m ga-azụta ya na ngwụcha ọnwa ... Aga m akọwara gị gbasara Samsung smartphones m nwere n'ụlọ niile ụdị m dere banyere ya bụ S6 onu gbakwunyere. Na mmekọrita na ọnụahịa ma ọ bụrụ na ọ dị oke ọnụ nye m n'onwe m, echeghị m na m nwere obi ụtọ Tecnología m si Samsung. Na ndị ọzọ, m nwere gia s maka m bụ ngafe. .ihe ozo otu izu gara aga m azutara mbipute GEAR S2 ma obu bilie. ..nwanyị na nwa m nwanyị dị afọ iri na atọ bụ ndị Apple fans nwere otu ụdị iphone ọhụrụ na elekere apple. .nke, m fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 13 ugbu a… .nke a bu ihe mmasi m ma m ga agwa gi otu ihe, enweghi m ego. abum onye oru di mfe ... maka 58 euro dis dị oke ọnụ. ..ihe ọma m kụrụ ya M na-elekọta ya ruo mgbe ọ na-ere ahịa ụbọchị 1 nke ịrụsi ọrụ ike na letus ọ bụla nke na-esi na m ma ọ bụ mmepụta anyị etinye m n'ahịa maka ire ere 90/10 euro ... ezigbo ndị enyi
OBI ụtọ na nkà na ụzụ
Gịnị na-eme Samsung S7 bụ anya 'na ihe mgbasa ozi a mere bụ nwatakịrị
Anyị agbalịrị ịhụ Galaxy S7 site n'akụkụ dị mma na akụkụ na-adịghị mma, yana ihe kpatara 7 ịzụta ya na 7 ịghara ịzụta ya. Nwere ike ido onwe gị n'akụkụ n'akụkụ ịchọrọ.
Site n'ụzọ, m ga-achọ ịbụ nwatakịrị ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ka m dị obere, ma ọ dị mwute na enweela m isi awọ.
Ihe niile kpatara ya n'ụwa. ...
M Galaxy S7 EDGE m ọzọ zuo
SAMSUNG E SAMSUSUNG ndị ọzọ abụrụla akụkụ nke gara aga ka anyị jiri ọdịnihu mee ihe
Ederede a bu ihe mkpofu, ikekwe onye dere ya bu onye komputa sayensi ma nwee iphone dere ya.
Na 3600mah, kedu ka batrị ga-esi kwụsị? Na a ozodimgba iko 5, kedu ihe ị na-ekwu banyere ihe na-agbaji nanị na-ele ya? Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, akụkụ azụ (nke tara ahụhụ karịa site na ọnyá ndị ahụ) pere mpe karịa s6.
Kedu ihe agbanwebeghị banyere s6 ??? Emela ka m chịa ọchị, naanị ka m nwee ike itinye kaadị ebe nchekwa na IP68 na-eguzogide mmiri, ọ ka mma, ọ bụghị ịkọwapụta interface dị mma karị maka ọrụ nke ihuenyo ihu na nsọtụ.
Willfọdụ n'ime parguelas ndị a ga-ede edemede a na-ekwu na enweghị ọdịiche dị n'etiti 1080p na 2k ma ọ bụ n'etiti 30fps na 60fps ...
Emela ka ọha na eze ọjọọ nke otu mpempe ekwentị nke na-aga ịgbagha kachasị mma mma wl afọ yana g5.
Ndi mmadu nwere ike ikwenye mgbe anyi nwere SAMSUNG PAY. .
Agụbeghị m ogologo oge, kama, m na-egbu oge m gụọ otu isiokwu, jọrọ njọ. O yiri ka ọ bụ ụlọ ọrụ ụfọdụ nke dị n'okpuru ikike Samsung kwụrụ ya.
Echere m na dịka ị si kwuo, isiokwu ahụ bụ "ihe 7 kpatara ị ga - eji zụta Galaxy S7" ka Samsung akwụgoro ya, nri?
O nweghi onyonyo infrared. Ọ bụ akụkụ nke s5 m dị ugbu a yana na m hụrụ n'anya, yabụ ịhapụ ya na-ewe m oke iwe na enwere m ike ịgbanwe agbanwe ma ọ bụ tụlee nhọrọ ndị ọzọ.
Ọ dịghị onye na-amanye gị ịzụta ya Maazị Villamandos. E nwere ilu na-ekwu "mgbe nkịta ọhịa enweghị ike iru mkpụrụ vaịn, ọ na-ekwu na ha gbara ụka." Echere m na ị ghọtara. Ọ bụ nhọrọ onye ọ bụla ịzụta ihe masịrị ha.
N’oge ọ bụla Nicoleta ekwughi na ọ bụ ezigbo mma ma ọ bụ ihe ọjọọ zụrụ n’ihi na ụbọchị abụọ gara aga, m nyere 7 ihe mere ịzụta ya na isiokwu a etinyewo m onwe m n’akụkụ nke ọzọ. M na-eche na S7 bụ ezigbo zụọ, ma ọ na-nwere ya na-adịghị mma ihe, dị ka ịzụ ihe ọ bụla ama.
Enwere ọtụtụ ule dobe nke S7 ihu ebe egosipụtara nguzogide a nabatara na mgbakwunye na ịnwe asambodo IP 68, nke ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu bụ mmezi ya, Ifix gosipụtara ya na ọwa YouTube. Ọ bụrụ na ọnụahịa ya karịrị ebe ọ bụ na ihe nrụpụta bụ US $ 255, ihe dịka S5 na ụbọchị ya (nke kachasị ọnụ bụ nhazi ya US $ 60). Mana ejiji ejiji na inwe udiri ohuru na ahia adighi ego maka otutu. M ka na-eche na site na Ihe ndị ahụ megidere ya na-emetụta ma ọ bụ zụta ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Nnwale nyocha ndị ahụ egosila na a na-anakwere nkwụsi ike nke S7 ihu ma ọ bụ S7 n'ụzọ ọzọ, isi ihe a bụ ma ọ bụrụ na nrụzi ya nke dịka Ifix dị na ọwa YouTube ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume, n'ihi na akụrụngwa ahụ dị iche iche, ya bụ, a na-ekesa ya na nkanka na ọ bụghị n’adabereghị, na-eme ka o sie ike dochie.
5 ″ Ọ bụ ihe a na-anakwere, ọ na-egosipụtakwa na arụmọrụ nke batrị ahụ, na nsọtụ m na-eche nha ahụ bara uru karịa afọ gara aga, nke ghọrọ asọmpi ziri ezi site na Nkọwa 5 ma ha ahọrọ ịghara ikesa ya ụfọdụ ahịa. Screendị ihuenyo ihu ya mere ihe dị iche na afọ gara aga ma ọ bụ ihe ndị ọrụ na-ahọrọ na tupu ahịa e gosipụtara ya
Ihe a na-egbochi ọnụahịa ahụ metụtara, ụdị ejiji na oge a ka ọkọlọtọ a na-eme ọdịiche dị n'etiti ndị hụrụ smartphones, ọ karịrị akarị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere ọnụahịa ya nke ihe dị ka $ 255, akụkụ ya kachasị oke ọnụ bụ ihe nhazi ya efu ihe dị ka Dollar 60.
Najar ego nke mkpuchi na ee mana onye ọrụ na-akwụ ụgwọ ahụ na mkpebi ịnwe ya ugbu a ọ bụghị na ọnwa ole na ole
Ndozi ndị ahụ nwere ike ịdị ole na ole n'ihe gbasara aesthetics ma ọ bụ nhazi ha, mana ndị anyị anaghị ahụ (sọftụwia na ngwaike) meziwanye nke ukwuu.
Na anyị achọghị ọdụm a n'ụzọ dị oke mkpa ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị ihe na-ewu ewu n'ahịa ahịa, nke ga-apụ n'anya mgbe ọ na-apụta na Nkọwa 6 ma ọ bụ S8 na na.
Ihe jọgburu onwe ya bụ isiokwu a (na-enweghị ezigbo ihe mgbakwasị) dịka Maazị Villamaldos na-anwa ịkọwa isiokwu ya site na ịzaghachi nkatọ ọ bụla, gbaghara m, mana dịka gị. o nwere nnwere onwe (ikwu okwu) ide edemede ya jọgburu onwe ya, ka ndị ọzọ gosipụta iwe anyị, ma D swallow ịkatọ nkatọ ... na Samsung dị ogologo!
Ha bụ ihe onye ọ bụla nwere uto. Dịkwa mma
Zaghachi rafael augusto machado viloria
Maria Jose Palacios A. Nkọwapụta dijo
kwenye kpam kpam IT KWES SOR F ỌZỌ Adịghị ịzụta ya>
Zaghachi Maria Jose Palacios A.
Enweela m S, S2, S4 na S5. Azụrụ m S7 ihu izu abụọ gara aga ma ọpụpụ na mgbe m dara site na elu nke akpa m, m gbajiri ihuenyo ahụ n'elu aka ekpe na ala. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ozodimgba 4 mgbe ahụ s5 siri ike
Zaghachi Eddy Reyes
M ga-echere ọnwa ole na ole mgbe s7 gachara, ka s6 wee daa na ọnụahịa ma nwee ike ịzụta s5 x)
Zaghachi Gabriel Salazar
Isiokwu ahụ dị ezigbo mma, ọ na-agwa eziokwu na eziokwu nke ihe, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ngwaọrụ okomoko na "teknụzụ na-egbutu ọnụ" ọ bụkwa eziokwu na n'oge dị mkpirikpi ọ ga-akwụsị ịbụ, ma atụrụ gị gaa n'ihu na-azụta oge ọ bụla ekwentị ọhụụ pụtara, n'ihi na ha amaghị nke a na-akọ, tinyere eziokwu ahụ bụ na ha amaghị na amaghị ihe ha na-azụ, ebe ọ bụ na ọrụ mgbasa ozi bụ maka iche echiche maka gị na ikpebiri gị. ebe ị na-eji ego gị ọ dị nso,
Chọrọ ihe kachasị mma, Mụta ịjụ ajụjụ na njedebe, ekwela ka ndị ọzọ chee echiche maka gị, ekwela ka ha zụọ ihe, THE B THE ONYE KWESINGR PR IHE.
Ezigbo azịza Angel ma ọ bụ eziokwu, Samsung Galaxy na-emebi emebi dị ka tebụl poselin na ndị mmadụ bụ naanị isiokwu nke ọmụmụ ihe na azụmaahịa na-agbazinye ego iji gosipụta na m na-akpọ nleghara anya chọrọ igosi ma banye n'ụgwọ na enweghị njikwa na-eme nzuzu dị ugbu a n'etiti ndị nzuzu a na-akpọ fanboys
Ugbokodo 73 dijo
Enwere m ahụmịhe na kọmputa 4 Samsung S7 Edge. Nke mbu sitere na nne m nke zutara ya ma tinyekwara ihu igwe amoled, ubochi ole na ole ida di mfe site na tebụl kichin zuru ezu ibibi ihuenyo ahụ kpamkpam. Nke abụọ sitere na nwunye nwanne m nwoke jiri ya na mkpuchi ya na mkpuchi, na ọdịda nkịtị nke onye ọ bụla na ekwentị ya na-enwekarị, otu akụkụ nke ihuenyo ahụ gbawara, nke atọ na nke kasị egbu mgbu bụ Personal, izu 1 mgbe ịzụrụ akụrụngwa ahụ, o doro anya na m nwere ya na mkpuchi "mkpuchi", ọdịda si n'akpa m na igodo n'okpuru bọtịnụ ahụ gbawara na ihuenyo gbawara n'akụkụ abụọ. Onye nke anọ bụ nne m, na ngwa ngwa n'ihi enweghị ekwentị, ọ zụtara otu akụrụngwa ahụ ọzọ, nke a bụ naanị otu maka na m zụtara ya mkpuchi 3 (anaghị m ekwubiga okwu ókè, ọ na-eburu ya 3 mkpuchi ebe niile) , nke mbụ o tinyere iko amoled ahụ, mgbe ahụ mkpuchi mkpuchi mkpuchi na n'elu ya mkpuchi roba nwere mkpuchi, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịde ya n'ụzọ dị nkasi obi, ọ na-ewe iwe ma ọ bụghị ma ọlị. Nchịkọta m, otu kachasị njọ m maara n'ihe gbasara ntachi obi. Samsung kwesịrị ikweta na ọ ga-akwụghachi akụrụngwa ahụ ma ọ bụ belata ya maka ụdị mbipute a, n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ ezubere ya, nke bụ iji ya. Ahọrọ m Samsung ọzọ n'ihi na enwere m Nkọwa 3 maka afọ 3 na-enweghị ncha, n'ụzọ doro anya na ọ bụghị ọnọdụ nke "ọjọọ" otu ahụ dịka anyị ga-ekwu na Argentina "OF PAPER". Azụchaghị ya ma ọ bụ zụta ụdị S7 ya.
Zaghachi ka manuelg 73
Na-ekwu site n ’echiche Ogbenye. Ma ọ bara uru ma ọ bụ na ọ dabere na ọtụtụ ihe. Achọrọ m ezigbo ịrụ ọrụ mkpanaka ma ọ masịrị m ịnọrọ na Android karịa iPhone. Azụrụ m ihu 7 na ebay maka euro 499 na eziokwu bụ na enwere m obi ụtọ
Ezigbo enyi ... ezinụlọ gị ọ nwere nsogbu ịhazi? Kedu ihe kpatara onye ọ bụla ji atụfu ya? Ọ bụ ekwentị kachasị elu, ị ga-elekọta ya ...
Ndị Lolo dijo
Ọ na-agbaji site na ihe ọ bụla, iburu ya n'akpa uwe jaket mkpuchi mkpuchi ahụ.
Zaghachi El Lolo
Kedu ihe nzuzu ... ọ bụ ama kachasị mma nke dị ọbụna taa ... ọnwa 11 ka edere isiokwu a ... nye ndị niile tụbara ya ebe a, ndị yiri ka ha nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo n'aka ha ma nwee ama dị elu Ogologo abụghị ihe kpatara iji lekọta ya, ịga n'ihu na Nokia 1100, ị nwere ike ịtụfu ya na ala nke ise ma ọ nweghị ihe mere ... maka ndị ọzọ, ndị chọrọ ịchọta ezigbo ọnụahịa / ogo, ọ dịghị ihe na-emeri Samsung S7 Edge. Anọ m na-eji ya kemgbe ọ bịarutere mba m ... obere ihe na-erughị 1 afọ gara aga, ọ ka dịkwa, na-ekwu na ọ dịghị otu akara e mere ebe ọ bụla na ekwentị ... arụmọrụ ahụ dị ịtụnanya ma zute atụmanya m niile. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị mma m megoro.
Otu ezigbo ihe kpatara ihe mkpofu a ji dị na ụlọ azụ nke Samsung ma ha rie ya: iko nke igwefoto azụ na-agbaji Naanị, ee, ị na-ahapụ mkpanaka ọhụụ ma dị oke ọnụ na tebụl akwa ahụ ma mgbe ị tetere, gị nzuzu, kwuru, sị iko na-kụrie, bibiri na Samsung na-agwa gị na "ihe a igbu ị nyere ya" na anaghị ana ego. Spend na-etinye ego ọzọ 100 ọzọ na ọ bụ ya, mana ha anaghị ekwe gị nkwa (n'ezie) na ọ gaghị eme ọzọ. Nke a ọ dịka ezigbo ihe kpatara ya?
Zaghachi Mª Jesús Sevillano Fuertes
M.Josee M. dijo
Otu ihe ahụ mere m, n'amaghị otu, otu izu mgbe m zụrụ ya, akụkụ dum azụ agbawaala, ọ gbawara dịka Granada ọbụlagodi mkpuchi mkpuchi ya na ihe niile, nke m na-ewute nke ukwuu maka ịzụta ya na Anaghị m akwado onye ọ bụla.
Zaghachi M. José M.
Samsung bụ ihe niile dị mma ma igwefoto ya na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ na ụdị ya niile
Zaghachi ka barechu
Samsung bụ ndị ụgha n'ihi na ha na-emesi obi ike na ha anaghị egbochi mmiri, ha abụghịkwa ebe nwa m nwanyị jiri ọchịchọ ịmata ihe tinye ya n'ime ọdọ mmiri iji see foto ma maa ihe merenụ, ọ nwetara mmiri ahụ, anaghị m akwado ha, mgbe m na-akpọga ya ọrụ teknụzụ tụrụ m n'anya na Samsung na ha na-ekwu na ọ bụghị ha kpatara ihe merenụ nakwa na ọ bụghị eziokwu na ọ bụ ihe na-egbochi mmiri kpamkpam, ekwesịrị m ịgba ha akwụkwọ maka ndị scammers ebe ọ bụ na ha dịkwa ụgbọala.
Ọ dị m nwute nke ukwuu na azụrụ m S7, m nọdụrụ ala n'oche slid si n'akpa uwe m na-ada nke ihe na-erughị 1 m na ihuenyo niile gbajiri.
Tupu m nwere A3 nke siri ike karị.